काठमाडौं, २३ मंगसिर: साताको अन्तिम दिन शेयर बजार घटेर बन्द भएको छ । परिसूचक घटेपछि कारोबार रकम भने १८ दशमलव ४३ प्रतिशतले बढेको छ । नेप्सेमा कारोबार रकम रू. ९ करोड ३७ लाखले बढेर रू. ६० करोड २५ लाख पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण रू. १७ खर्ब १८ अर्ब पुगेको हो । बिहीवार नेप्से परिसूचक शून्य दशलमव ५९ प्रतिशतले घटेको छ । केही समय उतार चढावमा रहेको बजार पहिलो ४० मिनेट देखि ओरालो लाग्न थालेको थियो । साढे १ घण्टा सम्म ओरालो झरेको बजार त्यसपछि भने स्थिर रहेको कारोबार भएको थियो । दिनभरीको व्यापारपछि परिसूचक ९ दशमलव २२ अङ्कले घटेर १ हजार ५ सय ४४ दशमलव ६८ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ ।
वित्त कम्पनी समूहको परिसूचक शून्य दशमलव शून्य ९ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, जलविद्युत समूहको परिसूचक १ दशमलव ३७ प्रतिशतले घटेको छ । बुटवल पावर कम्पनी बाहेक कारोबारमा आएका सबै जलविद्युत कम्पनीहरुको शेयर मूल्य घटेपछि यस समूहको परिसूचक २६ दशमलव ७५ अङ्कले घटेको हो । यस समूहको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स (आरएसआई) अहिले ओभर शोल्ड जोन अथवा ३४ दशमलव ९९ स्केलमा रहेको छ । यसले बजारमा जलविद्युत समूहको शेयरको खरिद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । ‘अन्य’ समूहको शून्य दशलमव ९४ प्रतिशतले घटेको छ । साथै, बैङ्किङ समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ६३ प्रतिशत, बीमाको शून्य दशमलव ६१ प्रतिशत, विकास बैङ्कको शून्य दशमलव ३३ प्रतिशत र होटलको शून्य दशमलव १३ प्रतिशतले घटेको हो ।
बिहीवार नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स (आरएसआई) अहिले न्यूट्रल जोन अथवा ३६ दशमलव ७८ स्केलमा रहेको छ । यसले बजारमा शेयरको खरीद बिक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । नेप्सेमा १ सय ३४ कम्पनीको ४ हजार ५ सय १ पटकको व्यापारबाट ७ लाख ३ हजार १ सय ६४ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।